Weerer Dil Iyo Dhaawac Qoys Qudha Ah Keenay Oo Laga Heshiiyay | HAYAAN NEWS
Weerer Dil Iyo Dhaawac Qoys Qudha Ah Keenay Oo Laga Heshiiyay
Hargeysa(Hayaannews): Salaadiinta iyo Waxgaradka beelaha Gobolka HAWD ayaa hannaan nabadgelyo ah u soo gebogabeeyey weerer lagu dilay Alle ha naxariiste Sheekh Ismaaciil Muuse Weyd, isla markaana lagu dhaawacay inan uu dhalay.
Sidaa waxa Afhayeenka Madax-dhaqameedka Beelaha ARAB Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi ku sheegay mar uu maanta u waramayay Shabakada Hayaannews, waxaanu u dhignaa sidan
“Waxaan ku guuleysanay oo aan so afjarnay dilkii foosha xumaa ee dhawaan ka dhacay degmada Axmed Dhagax ee Gobolka Maroodi-jeex, kuna geeriyooday Alle ha u naxariiste Marxuum Sheekh Ismaaciil Muuse Weyd laguna dhaawacay inan uu dhalay. Waxaanu marinay Xeerkii u yaalay Beesha ARAB ee ahaa 150-Halaad iyo qorigii lagu dilay Marxuumka in lagu bixiyo toddoba cisho gudahood maanta (shalay) oo ahayd Khamiis, taariikhduna ahayd 6 July 2017 ayaa arrintaas lagu soo gebogabeeyey Magaalada Baar-go’a oo ka tirsan Degmada Saylla ee Gobolka HAWD.
Munaasibadii loo sameeyey Afjarista arrintaas ayaa waxa ka soo qeybgalay Culima’udiin, Siyaasiyiin, Waxgarad, Cuqaal iyo guddidii hawl-wadeenada beelaha Arab.Waxaana arrintan hogaaminayay Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi iyo Ugaaska guud beelaha Somaliland Ugaas Axmed Cali Mahdi”
Isga oo hadalkiis sii watana waxa uu yidhi “Waxaanu si balaadhan ugu mahad-celinaynaa dadweynaha deegaanka Baar-go’a oo si mug leh hannaankaasi uga qeybqaatay muruq iyo maal-ba. Dhibanihii iyo dhib-geystihii oo si sharaf leh u aqbalay bugsiintii iyo samirkiiba oo muujiyay wanaag iyo tolnimo nabadgelyadana wax-weyn taray”.
Suldaan Xuseen Xaaji Cabdi Cabdilaahi